I-Anker PowerConf C300, ikhamera yewebhu enobuchule kunye nesiphumo sobuchule | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 01/06/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 27/05/2021 20:04 | ngokubanzi, Reviews
Ukusebenza ngomnxeba, iintlanganiso, iifowuni zevidiyo ezingapheliyo ... Usenokuba uqaphele ukuba ikhamera yewebhu kunye nemakrofoni yelaptop yakho bezingalunganga njengoko ubulindele, ngakumbi ngoku ekubeni olu hlobo lonxibelelwano lwedijithali sele luxhaphakile. Namhlanje sikuzisa isisombululo esinomtsalane kuzo zonke ezi ngxaki.
Sihlalutya i-Anker PowerConf C300 entsha, ikhamera yewebhu esebenzayo kunye nesisombululo se-FullHD, i-Wide Angle, kunye neempawu zeArtificial Intelligence. Fumanisa kuthi zonke iimpawu zesi sixhobo sikhethekileyo kwaye ngawaphi amanqaku asomeleleyo xa kuthelekiswa neembangi ezizodwa, kwaye kunjalo namanqaku aso abuthathaka.
2 Ukufakwa kunye nesoftware enokwenziwa ngokwezifiso
4 Okuhle nokubi
Sele siyazi i-Anker ngaphambili, yinkampani edla ngokukhetha uyilo lweprimiyamu kunye nezixhobo kwiimveliso zayo, into ethi ubudlelwane bayo bexabiso buyenze icace kuthi. Ngokubhekisele kuyilo, inefomathi eqhelekileyo, sinepaneli esembindini apho inzwa iphambili embindini, ijikelezwe yiringi yentsimbi enemibala apho siza kufunda khona amandla ayo. I-1080p (i-FullHD) yokubamba ngama-60FPS amaxabiso esakhelo. Umva wakhiwe ngeplastiki ye-matte enika imvakalelo yomgangatho kunye nokuqina okumangalisayo. Inokuvula kwekhebula kule ndawo inye yangasemva I-USB-C eya kusebenza njengesixhobo sokudibanisa kuphela.
Intambo ye-USB-C yi-3m ubude
Elokugqibela yindawo elungileyo kuba ikuvumela ukuba usebenzise isithuba esingaphezulu. Ngokumalunga nenkxaso, inenkxaso kwinxalenye esezantsi, ehlengahlengiswayo ukuya kwi-180º kunye nomtya wokuxhasa isikrufu okanye i-tripod yakudala. Inendawo ezimbini zokuxhasa ezinamanqanaba ali-180º kwaye ekugqibeleni indawo ephezulu, apho ikhamera Izakusivumela ukuba sijikelezise ngokuthe tyaba ngo-300º kwaye enye ibe ngu-180º ngokuthe nkqo. Oku kukuvumela ukuba uhlengahlengise ikhamera ukuze isetyenziswe etafileni, kwi-tripod okanye ngenkxaso ephezulu esweni, apho ingayi kuthatha indawo kwiscreen.
Kule meko sifumana ulongezo olunomdla, ngaphandle kokungabikho kwenkqubo yokuvalwa yokugubungela iilensi ezidityaniswe kwikhamera, Ewe, iAnker ibandakanya ezineziciko ezinefomathi yokutyibilika kwiphakheji kwaye ziyancamathela, singazibeka kwaye sizisuse ngentando yesivamvo, ngale ndlela siya kuba nakho ukuyivala ikhamera kwaye siqiniseke ukuba abasirekhodisi, nokuba banxibelelana nayo. Nangona kunjalo, sinesalathiso esingaphambili se-LED esiya kusilumkisa ngemeko yokusebenza kwekhamera.
Eyona nto ibalulekileyo yile Anker PowerConf C300 Iplagi kunye nokudlala, Ngale nto ndithetha ukuba izakusebenza ngokuchanekileyo kuphela ngokudibanisa nezibuko USB-C Kwikhompyuter yethu, nangona kunjalo, sikhatshwa yi-USB-C ukuya kwi-USB-iadaptha yamatyala apho kukho imfuneko. Inkqubo yayo yobukrelekrele bokulinganisa kunye namandla e-autofocus kufuneka yanele kumhla wethu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba nesoftware yenkxaso, kule meko sithetha ngayo AnkerWork onokuzikhuphelela simahla, kuyo siza kufumana ukhetho oluninzi, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu yinto enokwenzeka yokuhlaziya isoftware ye-webcam kwaye ke yongeze inkxaso yayo.
Kule software Siza kukwazi ukulungelelanisa ii-engile ezintathu zokubukela ze-78º, 90º kunye ne-115º, kunye nokukhetha phakathi kweempawu ezintathu zokubamba phakathi 360P kunye ne-1080P, Ukuhamba ngamathuba okuhlengahlengisa i-FPS, ukwenza nokungasebenzi kugxilwe, i eye kunye Umsebenzi weAnti-Flicker Inomdla kakhulu xa sikhanyiswa ziibhalbhu ze-LED, sele uyazi ukuba kwezi meko iiflaya zihlala zibonakala zinokucaphukisa, into esiza kuyiphepha ngokukodwa. Ngaphandle kwayo yonke into, siya kuba neendlela ezintathu ezingagqibekanga kuxhomekeke kwiimfuno zethu ethi ithiyori isebenzise ngokupheleleyo i-Anker PowerConf C300:
Sicebisa ukuba uthathe isigqibo malunga nale khamera ifumaneka kwiwebhusayithi yeAnker nakwiAmazon, ukuba ukhawuleze ufake iAnker Work kwaye uthathe ithuba lokuhlaziya i-firmware yekhamera, njengoko kuyakufuneka ukuba isebenze kwaye isebenze umsebenzi we-HDR.
Le Anker PowerConf C300 iqinisekisiwe ngokusetyenziswa kwayo ngokuchanekileyo kunye nokusetyenziswa okufana nokusondeza, ngale ndlela, sithathe isigqibo sokuba iya kuba yeyona khamera iphambili yokusasaza i-iPhone News Podcast Apho ukusuka kwiActualidad Gadget sithatha inxaxheba kuyo veki nganye kwaye apho uya kuba nakho ukuxabisa umgangatho wayo womfanekiso. Ngendlela efanayo, sineemakrofoni ezimbini ezinokucinywa kokumanyelwa okusebenzayo ukubamba ngokucacileyo ilizwi lethu kunye nokuphelisa isandi sangaphandle, into esibe nakho ukuqinisekisa ukuba isebenza kakuhle.
Ikhamera Iphatha kakuhle kwiimeko zokukhanya eziphantsi kuba inenkqubo yokulungiswa komfanekiso kwezi meko ngokuzenzekelayo. Asifumananga naziphi na iingxaki zokusebenza kwi-macOS 10.14 ukubheka phambili, okanye kwiinguqulelo zeWindows ezingaphezulu kweWindows 7.
Ngaphandle kwamathandabuzo ithathwa njengesixhobo esichazayo kwiintlanganiso zethu zomsebenzi ngenxa yomgangatho weemakrofoni kunye nokusetyenziswa okunokusinika, ukuba uthatha isigqibo sokubheja kwiAnker PowerConf C300 ngaphandle kwamathandabuzo awuzukuphazama, ukuza kuthi ga ngoku, eyona ilungileyo sizamile. Yifumane kwi-euro ezili-129 kwiAmazon okanye kwiwebhusayithi yayo.
Ithunyelwe nge: 1 Juni ka 2021
Umgangatho olungileyo womfanekiso
Ukubanjwa kwesandi esikhulu kunye nokugxininisa
Isoftware ephucula ukusebenziseka kunye nenkxaso elungileyo
Ukuphatha ibhegi kulahlekile
Isoftware ikwiNgesi kuphela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Anker PowerConf C300, ikhamera yewebhu enobuchule kunye nesiphumo sobuchule